Wiil Kamida Kuwa Kubada Soo Qabta Oo Dirqi Kaga Badbaaday Gacanta Mourinho
HomeWararka MaantaWiil Kamida Kuwa Kubada Soo Qabta Oo Dirqi Kaga Badbaaday Gacanta Mourinho
Gunaanadka Kulankii Chelsea Lagaga Adkaaday 1-0 ka ee ay kaga guulaysatay kooxda Crystal Palace, ayaa wiil yar oo kamid ah caruurta kubadaha garoonka ka baxa ku soo celiya ee garoonka Selhurst Park uu ku sigtay in lagu gacan saaro gacan culays uu ka dareemay tababare Jouse Mourinho oo markan cadho badani ka muuqatay.
Tababare Mourinho oo is tusay inuu wakhtiga ridayo inankaas yari , kubadana uu la raagayo oo gacan culays badani ku jiro , ciyaartiina sii dhamaanayso , ayaa u tagay oo si kulul ula hadlay bilowgiiba hadal digniin ahna u laqimay.
Degenaan iyo cabsi badan oo ilmaha yar gashay ayaa keentay aakhirkii in Tababare Mourinho madaxa u salaaxo waanona raaciyo.
Jose Mourinho oo warbaahintu wax ka weydiisay ciyaarta kadib , wixii dhex maray isaga iyo wiilka yar , ayaa sheegay inuu uga digay suurogalnimada ciyaaryahan xanaaqsan oo feedh ama laad ku dhuftaa inay ku iman karto innankaasi.
Mourinho ayaa tilmaamay in sababta uu ugu tagay wiilkaas kubad soo qabashada shaqadiisu tahay , ahayd kadib markii uu xasuustay laadkii uu ku kiciyey Eden Hazard kubad soo qabtihii garoonka kooxda Swansea sanadkii hore ee saddexda kulan lagaga ganaaxay ciyaaryahanka.
“Eden Hazard ayaa laga ganaaxay inaanu garoonka soo gallin saddex kulan, markii uu laad ku dhuftay wiilkii kubada soo qabanayay ee kooxda Swansea oo kubada la raagayay sanadkii hore.” Ayuu yidhi Mourinho
“Ma Jecli inamada daandaansiga ku sameeyey ciyaaryahanada, sababtoo ah maalin ay noqotoba. Dhacdadii ka dhacday Swansea sanadkii hore, markii uu ciyaaryahan is xejin waayay cadho darteed ee uu dambiga aanu galabsan ku gallay. Sidaas darteed , aniga waxay ila tahay inaanay ahayn wax fiican in wiilasha yaryar la baro inay sameeyaan waxyaabahaas oo kale.”
Isagoo ka sheekaynaya dhab ahaan wixii uu ku yidhi wiilka yar , Mourinho wuxuu yidhi.| “ Waxaan ku idhi jooji sidan aad wax u wado , haddii kale waxaad khatar ugu jirtaa in mid ka mid ah ciyaaryahanadaydu cadhadu ka tan badato oo uu fal xun kugu sameeyee. Waxaan doonayay inaan ka hortago rabshad dhallan karta. Ma jecli mushkiladaha, waxaan aad uga cabsi qabay in shaydaan meel uun ka yimaado oo halkaas mashaqo ka dhacdo. Wiilkuna wuu I fahmay, waayo wuxuu garanayay waxaan kala hadlayo inay naftiisa tahay.”
“ Jooji wakhtiga aad luminayso , haddii kale nin kaa weyn ayaa kuu gacan qaadi doona “ ayaan ku idhi buu yidhi tababare Jose Mourinho
Tababare Mourinho Oo Guuldarradii Chelsea Ee Champions-ka Dusha Ka Saaray Hazard
Busquets Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Saxaafada, Dafirayna Fal Uu Si Cad U Sameeyey, Xaqiraadna Ula Badheedhay Kooxda Real Madrid